anwu lekwasịrị anya n'ihe okike ugbu a - na-emebi mgbasa ozi ọdịnala, mkpọsa, na paradaịs vidiyo. Ọ bụ ebe a na-ere ahịa na-asọ asọ na-agagharị n'okirikiri egwu, ọdịbendị, ejiji, na ndị ama ama na-enye ndị na-ese ihe ikike ịmepụta ụlọ ahịa na-ewu ewu na vidio egwu ha ka ha nwee ike ree ngwa ahịa ha, mbipụta ole na ole, na uwe akwa n'okporo ámá.
Obi dị anyị ụtọ na anyị na-enyere ndị na-ese ihe na Fans aka ịchọpụta ma jikọọ ibe ha na ọkwa dị omimi. Vidio egwu dị iche iche dịka ha dị na njikọta ọdịbendị, nka, egwu, na ejiji ma bụrụ nhọrọ doro anya maka ngwa izizi mbụ anyị nke teknụzụ anyị.
Enwere m ike ịhụ Amazon, n'ọdịnihu dị nso, na-enye ohere ịmepe windo ịzụ ahịa mgbe ị na-ele FireTV gị, na-agagharị na ngwaahịa ahụ na ihuenyo ahụ, wee tinye ya na ụgbọ ibu azụmahịa nke Amazon.